Nkwụghachi ụgwọ maka nkwekọrịta ọrụ - Law & More B.V.
blog » Ego nkwụghachi ụgwọ maka nkwekọrịta ọrụ: kedu ka ọ si arụ ọrụ?
Ego nkwụghachi ụgwọ maka nkwekọrịta ọrụ: kedu ka ọ si arụ ọrụ?
N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọrụ nke nkwekọrịta ọrụ ya kwụsịrị nwere ikike inweta ụgwọ akwụsịrị iwu kwadoro. A na -akpọkwa nke a ụgwọ ịkwụ ụgwọ, nke ezubere ịkwalite mgbanwe na ọrụ ọzọ ma ọ bụ maka ọzụzụ ga -ekwe omume. Mana kedu iwu gbasara ịkwụ ụgwọ mgbanwe a: kedu mgbe onye ọrụ ruru ya na ego ole ka mgbanwe ahụ bụ kpọmkwem? A na -atụle iwu gbasara ịkwụ ụgwọ ntụgharị (nkwekọrịta nwa oge) nke ọma na blọgụ a.
Ikike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ
Dabere na nka. 7: 673 paragraf nke 1 nke Usoro Obodo Dutch, onye ọrụ nwere ikike ịkwụ ụgwọ mgbanwe, nke nwekwara ike iji ya maka ebumnuche metụtara ọrụ. Nka. 7: 673 BW na -akọwapụta ọnọdụ nke onye were ọrụ ga -akwụrịrị nke a.
Njedebe nke nkwekọrịta ọrụ na mbido onye were gị n'ọrụ na mbido onye ọrụ
site kagbuo ikike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ọ dịghị mma*
site na mgbasa ikike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ọ dịghị mma*
site n'iwu nke iwu na -aga n'ihu ikike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ọ dịghị mma *
* Onye ọrụ bụ naanị onye nwere ikike ịkwụ ụgwọ mgbanwe ma ọ bụrụ na nke a sitere na arụrụ arụ dị oke njọ ma ọ bụ nhapụ nke onye were ya n'ọrụ. Nke a bụ naanị ikpe n'oke ikpe dị ka iyi egwu mmekọahụ na ịkpa oke agbụrụ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, otu ọ bụla, onye were mmadụ n'ọrụ enweghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ. Ewezuga ya bụ:
onye ọrụ dị afọ iri na asatọ ma rụọ ọrụ erughị awa iri na abụọ n'izu n'ogologo;
nkwekọrịta ọrụ na onye ọrụ ruru afọ ezumike nka akwụsịla;
nkwụsị nke nkwekọrịta ọrụ bụ nsonaazụ dị oke njọ nke onye ọrụ mere;
Ekwuputala na onye were gị n'ọrụ enweghị ego ma ọ bụ na ọ kwụsịtụrụ;
nkwekọrịta ọrụ ndị otu na -akọwapụta na kama ịkwụ ụgwọ nkwụgharị, ị nwere ike nweta ndokwa nnọchi ma ọ bụrụ na nchụpụ a mere maka ebumnuche akụ na ụba. Ụlọ ọrụ nnọchi anya nke a dabere na ọnọdụ ụfọdụ.
Ọnụ ego ịkwụ ụgwọ mgbanwe
Ụgwọ ntụgharị ahụ bụ 1/3 nke nnukwu ụgwọ ọnwa kwa afọ nke ọrụ (site na ụbọchị ọrụ 1st).
A na -eji usoro ndị a maka ụbọchị niile fọdụrụ, kamakwa maka ọrụ nke na -erughi otu afọ: (ụgwọ ọnwa enwetara na akụkụ fọdụrụ nke nkwekọrịta ọrụ /ụgwọ ọnwa kwa ọnwa) x (1/3 nnukwu ụgwọ ọnwa /12) .
Ya mere, ego ole ịkwụ ụgwọ mgbanwe na -adabere na ụgwọ ọnwa yana oge onye ọrụ na -arụrụ onye were ya n'ọrụ. A bịa na ụgwọ ọnwa, a ga -etinyekwa ego ezumike na ụgwọ ọnwa ndị ọzọ dị ka ego nkwanye ego na ụgwọ ọrụ oge. A bịa na oge ọrụ, a ga -agbakwunyere nkwekọrịta onye ọrụ na otu onye were ya n'ọrụ na ngụkọta oge nke afọ ọrụ. Nkwekọrịta nke onye na -ewe mmadụ n'ọrụ na -anọchi anya, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ na -arụrụ onye were ọrụ ọrụ na mbụ site na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọrụ, ga -agbakwunyere. Ọ bụrụ na enwere ihe karịrị ọnwa 6 n'etiti nkwekọrịta ọrụ abụọ nke onye ọrụ, nkwekọrịta ochie ahụ esoghị na ngụkọta oge nke afọ ọrụ arụ ọrụ maka ngụkọta oge ịkwụ ụgwọ mgbanwe. A gụnyekwara afọ onye ọrụ ahụ na -arịa ọrịa yana afọ ole ọrụ rụrụ. E kwuwerị, ọ bụrụ na onye ọrụ na -arịa ọrịa ogologo oge site na ịkwụ ụgwọ ụgwọ na onye were ya n'ọrụ chụrụ ya n'ọrụ ka afọ abụọ gachara, onye ọrụ ahụ ka nwere ikike ịkwụ ụgwọ mgbanwe.
Ego ịkwụ ụgwọ kacha akwụ ụgwọ nke onye were gị n'ọrụ ga -akwụ bụ € 84,000 (na 2021) ma na -ahazi kwa afọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ gafere oke ego a dabere na usoro mgbako dị n'elu, yabụ na ọ ga -enweta naanị transition 84,000 ịkwụ ụgwọ mgbanwe na 2021.
Site na 1 Jenụwarị 2020, ọ naghịzi emetụta na nkwekọrịta ọrụ ga -anọrịrị opekata mpe afọ abụọ maka ikike ịkwụ ụgwọ mgbanwe. Site na 2020, onye ọrụ ọ bụla, gụnyere onye ọrụ nwere nkwekọrịta nwa oge, nwere ikike ịkwụ ụgwọ mgbanwe site n'ụbọchị ọrụ mbụ.
Ị bụ onye ọrụ ma ị chere na ị tozuru oke ịkwụ ụgwọ mgbanwe (na ịnatabeghị ya)? Ma ọ bụ ị bụ onye were ọrụ ma ị na -eche ma ọ bụ iwu na ị ga -akwụ onye ọrụ gị ụgwọ ịkwụ ụgwọ? Biko kpọtụrụ Law & More site na ekwentị ma ọ bụ ozi-e. Ndị ọka iwu anyị ọkachamara na ọkachamara na ngalaba ọrụ na -enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Previous Post Nkebi nke enweghị asọmpi: gịnị ka ị kwesịrị ịma?
Next Post Kedu ihe ọkaiwu na-eme?